Jery taratra… herinandro : fitokonana etsy sy eroa | NewsMada
Jery taratra… herinandro : fitokonana etsy sy eroa
Manohy ny fitokonany ny mpirakidraharaha amin’ny fitsarana, tarihin’ny sendikàny. Toy izany koa ny mpandraharaha fonja. Manambatra ny heriny aza ny sendikà roa tonta, fa hoe tsy mijery ny fitakiany momba ny tambin-karama, fampitaovana… Mitaraina ireo manan-draharaha eny amin’ny fitsarana, ireo manana voafonja tokony hotsaraina. Misy aza ny manahy ny hampirongatra ny fitsaram-bahoaka.
Tsy vitan’izany, manambana hanao fitokonana koa ny vandintany, fa tsabahin’ny olom-boafidy sasany ny raharahany. Hanao ahoana? Nilaza ny filoham-pirenena fa efa misy vahaolana ny amin’izany. Velon-taraina ny mpitsara sasany noho ny hoe fisian’ny kolikoly sy tsy fanarahan-dalàna eo anivon’ny Filankevitra ambony momba ny fitsarana (CSM), araka ny traktra miely eo anivon’ny tontolon’ny fitsarana.
Zary fomba ny fitokonana? Mitokona tsy hiditra amin’ny governemanta vaovao ny vondrona Mapar. Tsy fantatra be ihany ny antoko Tim. Taorian’ny famindram-pahefana tamin’ny Praiminisitra teo aloha, Ravelonarivo Jean, andrasana ny fijoroana sy ny asan’ny governemanta vaovao hiatrika ny ady amin’ny fahantrana, tsy fandriampahalemana, fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena…
Amin’izany rehetra izany, tsy mitsahatra ny fanehoan-kevitra etsy sy eroa: fitakiana fifidianana mialoha ny fotoana, ohatra. Mandeha aza ny resaka ny amin’ny mety hisian’ny fitsipaham-pitokisana ny praiminisitra vaovao. Antony, ny fitaka bevava natao tamin’ireo depiote sasany tamin’ny fanolorana anaran’izay ho praiminisitra. Mba tena hisy amin’izay ny fahamarinan-toerana sy fitoniana politika maharitra?
Mila ezaka ny fisokafan’ny loharanom-baovao ho an’ny mpanao gazety, raha ny loabary an-dasy momba izany. Laharam-pahamehana ny fampandaniana sy fandaniana eny anivon’ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna momba ny fifandraisana. Aiza ny sosialim-bahoaka? Misy ny fikambanan’ny mpanjifa nilaza hidina an-dalambe noho ny fahasahiranam-piainana. Tafajoro ny governemanta vaovao. Hanao ahoana?